केवल तपाईंको जीवनमा२ चिजको प्रयोगले खोक्रो बनाउँछ तपाईको हड्डी, लाग्ने गर्दछ असाध्यै थकाइ !!!! – News Nepali Dainik
केवल तपाईंको जीवनमा२ चिजको प्रयोगले खोक्रो बनाउँछ तपाईको हड्डी, लाग्ने गर्दछ असाध्यै थकाइ !!!!
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २०, २०७७ समय: १९:२३:०८
आजको समयमा बजारका अधिकांश मानिसहरू विक्रेताहरु धेरै खाना खान चाहन्छन्। यी व्यक्तिहरू, जसले बजारमा बेचेका खानाहरू खान मन पराउँछन्, यस्ता मानिसहरुको समयको साथ पौष्टिक तत्त्वहरूको अभाव हुन थाल्छ।
आजको समयमा धेरैजसो मानिसहरु मासुको सेवन अधिक मात्रामा गर्दछन् । मासुको सेवन हाम्रो शरीरको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ। तर मानिसहरूलाई मासु दिनदिनै खानाले हुने नोक्सानीको बारे थाहा छैन।
जसको कारण मानिसहरू धेरै मासु खान्छन्। त्यसकारण हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि यदि तपाईंले धेरै मासु खान्नुहुन्छ भने, मासुमा हाइड्रोक्लोरिक एसिडको मात्राले बिस्तारै तपाईंको हड्डीहरू पग्लन्छ। जसको कारणले तपाईको शरीरमा जोर्नी पनि दुख्न थाल्छ।
Last Updated on: February 2nd, 2021 at 7:23 pm